Ny tsara indrindra amin'ny fampiharana Photos amin'ny macOS Sierra | Avy amin'ny mac aho
Miaraka amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny macOS Sierra Tamin'ny 20 septambra, nisy fiasa sy fiasa vaovao tonga tamin'ny Macs. Ny ankabeazanay, noho ny maha zava-dehibe azy, dia nifantoka tamin'ny fampidirana Siri for Mac, nandrasana hatry ny ela ny mpampiasa, ny clipboard manerantany, ny famohana fiara mandeha ho azy avy amin'ny Apple Watch, na izany fahafaha-manao izany fa tsy maintsy manana ny fisie avy amin'ny Desktop sy ny Documents amin'ny fitaovana misy antsika amin'ny alàlan'ny iCloud.
Na izany aza Nahazo vaovao mahaliana ny fampiharana Photos izay mampanan-karena be ny fampiasana azy. Ny sary Photos for Mac dia nahatratra ny kinova 2.0 ary miaraka aminy, dia nandova ampahany lehibe amin'ireo fisehoan-javatra vaovao natomboka herinandro lasa teo tao amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ireo fitaovana finday tamin'ny fanombohan'ny iOS 10. Andao hojerentsika izay azontsika atao izao Fampiharana sary amin'ny solo-sainay Mac.
1 Mitadiava dia hahita ianareo
2 «Fahatsiarovana» ​​tsara indrindra ho anao
3 Ny sarinao, amin'ny toerana tena izy
4 Ampifandraiso ny «Memories»
5 Manaova sary, manoratra, manoratra
6 Ary ankafizo tsara amin'ny Apple TV
Mitadiava dia hahita ianareo
Ny fampiharana Photos vaovao ho an'ny Mac, toy ny ao amin'ny iOS 10 ihany, manan-tsaina kokoa ioary. Noho ny algorithman'ny fikarohana nataon'i Apple, dia afaka mamantatra ny olona, ​​ny toerana ary ny zavatra ary miorina amin'izany, afaka mitady "fiara", "trano", "alika" na "Seville" isika ary ireo sary mifandraika dia haseho antsika avy hatrany .
Tsy misy interface manokana ho an'ity endri-javatra vaovao ity, hita ao amin'ny halalin'ny Photos izy io. Soraty fotsiny ny boaty fikarohana (hita eo ankavanan'ny efijery) izay tadiavinao, dia ho hitanao izany.
«Fahatsiarovana» ​​tsara indrindra ho anao
Misaotra ihany koa an'ireo algorithma manan-tsaina nampiharin'i Apple, ny fampiharana Photos ho an'ny Mac dia mampiditra ny "Fahatsiarovana" izay, toy ny amin'ny iPhone na iPad misy ny iOS 10, dia afaka misitrika amin'ny sary sy horonan-tsary rehetra hanangonana azy ireo amin'ny fikarakarana "Memories". Ilaina indrindra ny fiasa ho an'ireo izay manangona sary sy sary nefa manadino foana ny manangana rakikira.
Ireo "Fahatsiarovana" ireo dia manambatra sary sy horonan-tsary, lohateny ary feonkira. Y azontsika atao ny manitsy azy ireo araka izay itiavantsika azy manova mozika, manampy na manolo sary sy maro hafa.
Ny sarinao, amin'ny toerana tena izy
Eny eny, ara-bakiteny izany. Satria amin'izao fotoana izao Ny sary dia mampiasa ny geolocation hita ao amin'ny metadata ny sarinay hanehoana aminay sari-tany. Raha mitsangatsangana any Barcelona ianao, amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny fizarana "Places" fotsiny eo amin'ny sisiny ankavia dia ho fantatrao hoe firy ny sary sy horonan-tsary nalainao tamin'ny dia nataonao ary, mazava ho azy, afaka miditra ianao izy ireo mivantana.
Ho hitanao eo amin'ny sarintany ny fitehirizam-sary rehetra nataonao, fa araka ny nolazaiko dia hahafahanao mijery lalina ny hetsika sasany, rakikira ary maro hafa. Raha ny marina, ireo "Fahatsiarovana" noresahintsika teo aloha, dia misy koa sarintany eo ambany izay mampiseho amintsika ireo toerana nalaina sary.
Ary raha manitatra ny sarintany ianao dia ho hitanao fa feno pitsopitsony kokoa ilay toerana, amin'izay dia ho hitanao ny sary nalainao tamina toerana manokana toy ny zaridaina, tranombakoka sns.
Ampifandraiso ny «Memories»
Mampiasa ny metadata rehetra misy ny sary mba hiteraka lisitr'ireo "Fahatsiarovana" mifandraika izay hitanao eo amin'ny faran'ny fitadidiana tsirairay. Ohatra, ny Fahatsiarovana fitsidihana ny tranon'ny ray aman-dreninao amin'ny Krismasy dia hifandray amin'ny fahatsiarovana ny Krismasy hafa izay nandehananao tany an-tranon'ny ray aman-dreninao koa.
Manaova sary, manoratra, manoratra
Endri-javatra iray hafa nolovaina tamin'ny iOS 10 dia izany azonao atao ny mampiasa ny fanitarana markup hanoratanao sary sy hanoratanao amin'ny sarinao. Mety tsy dia asa mahasoa loatra izany, raha ny marina dia tsy izy, fa indraindray mety hahafinaritra sy am-boalohany, indrindra raha hizara an'io sary io amin'olona isika.
Ary ankafizo tsara amin'ny Apple TV
Amin'ny famoahana ny tvOS 10 ho an'ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra dia ho hitanao ny rakipeo, ny fahatsiarovanao ary bebe kokoa amin'ny efijery lehibe. Ary farany, mahaliana ny fidirana amin'ny sary avy amin'ny Apple TV satria ny marina dia talohan'izay, tena nahantra aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Ny tsara indrindra amin'ny fampiharana Photos amin'ny macOS Sierra
Ny Polar Photo Editor dia misy fihenam-bidy lehibe ao amin'ny Mac App Store